Indhaha Ayaa Idhiigaya!!-Real Madrid Miyaa Ku Dhawaaqday Heshiiska Ashley Young? - Gool24.Net
Indhaha Ayaa Idhiigaya!!-Real Madrid Miyaa Ku Dhawaaqday Heshiiska Ashley Young?
Real Madrid ayaa xagaagan si wayn ugu jirta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna taageerayaasha Los Blancos ay ilaa hadda soo arkayeen kooxdooda oo war saxaafadeed badan oo rasmi ah soo saaraysay kuwaas oo loogu dhawaaqay heshiisyo ay ka mid ahaayeen Eden Hazard iyo Luka Jovic.
Laakiin waxaa dhacday arin soo jiidatay dareenka taageerayaasha kooxaha Real Madrid iyo Manchester United oo la xidhiidha xidiga Old Trafford laga nacay ee Ashley Young.
intii ayna Real Madrid ku dhawaaqin heshiiska Eden Hazard iyo xidigaha kale waxay taageerayaasha Madrid inta ugu badan u dhegtaagayeen in ay maqlaan ama arkaan kalmadaha ‘Comunicado Oficial’ oo ah qaabka ay Madrid ugu dhawaaqdo saxiixyada cusub.
War saxaafadeedka rasmiga ah oo u dhigma ‘Comunicado Oficial’ ayaa ah kan ay Real Madrid u adeegsato marka ay luuqada Isbaanishka ku sheegayso war saxaafadeed rasmi ah oo la xidhiidha ciyaartoy ay la soo wareegtay ama arin cusub.
Laakiin taageere ayaa jamaahiirta Real Madrid iyo Manchester United kaga yaabsaday in uu qaabka Real Madrid wax ugu dhawaaqdo u soo sameeyay in Ashley Young uu ku biiray Madrid taas oo taageerayaasha qaar layaab ku riday.
Haddii ay jaamahiirta Madrid ku soo raaxaysteen war saxaafadeedkii rasmiga ahaa ‘Comunicado Oficial’ ee ay kooxdoodu ka soo saartay Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy iyo Rodrygo waxay qaadan kari waayeen markii isla astaanta iyo qaabka ay Madrid wax ugu dhawaaqdo loo soo sameeyay Ashley Young.
Jamaahiirta Manchester United oo nacaybkii ugu danbeeyay u haya Ashley Young ayaa farxad iskala garan waayay waxayna fahmi kari waayeen sababta ay Real Madrid ula wareegtay xidiga ay ku ducaysanayeen in xataa si xor ah lagu diro.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Real Madrid oo aan waxba hubsan ayaa u qaadan kari waayay nooca heshiiska ay kooxdoodu ku dhawaaqday inkasta oo uu ahaa war been abuur ah oo uu taageere kaftan ahaan u sameeyay.
Mid ka mid ah taageerayaasha ku dhacay dabinka kaftanka ee uu Ashley Young loogu sheegay in uu Real Madrid ku biiray ayaa soo qoray: “Anigu amaan kuma dareemayo twitterka”.
Taageere kale oo Real Madrid ah ayaa isna soo qoray: “Indhaha ayaa i dhiigaya” wuxuuna kaftan kani noqday mid dad badan looga yaabsaday isla markaana si wayn ugu baahay barta twitterka isla markaana falcelin badan laga sameeyay.
Laakiin meelo badan ayaa lagu soo qoray war deg deg ah iyo in Real Madrid ay heshiis todoba sanadood ah kula soo wareegtay Ashley Young waxayna taageerayaasha ku noqotay lama filaan iyo amakaag.
Breaking news: Real Madrid have officially announced the signing of Ashley Young on a 7 year deal.#realmadrid #AshleyYoung pic.twitter.com/KJt3Blt7Bd
— Sky Sports News⚪ (@Skyspurtsnews1) June 21, 2019
Laakiin marki ay taageerayaasha Manchester United si dhab u ogaadeen in waxa ay arkeen uu yahay kaftan uu taageere si xariiftinimo leh u sameeyay waxay bilaabeen in ay nacayb kale u sii qaadaan Young halka taageerayaasha Madrid ay farxad u noqotay in sheekadu ay kaftan ahayd.